မင်းခက်ရဲ ● Ars poetica ဆိုတဲ့သဘော – MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈
၂ဝ၁၈ သြဂုတ်လထုတ် မိုးမခမဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်သည်။
Ars poetica – “art of poetry” (ကဗျာ့အတတ်ပညာ)၊ ကဗျာအတတ်ပညာအကြောင်းပြောတဲ့ ကြေညာစာတမ်လိုအရာမျိုး ကို ဆိုလိုတယ်။ အလင်္ကာရှည်တွေရေးတဲ့ ကဗျာ ဆရာဟာ ကဗျာဆိုတာ ဘယ်လို၊ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုတည် ဆောက်ရမယ်။ ကဗျာဆိုတာ ဘာလဲ စတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သတ်တာကို ကဗျာ့အတတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်ယ်။ ကဗျာ့အတတ် ပညာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘီစီ ၂ဝ ရာစုလောက် ရောမကဗျာ ဟိုးရေ့စ်က ရေးသားခဲ့တယ်။ ကဗျာဆိုတာ ဘာလဲနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကြေညာစာတမ်းတွေကိုလည်း Ars Poetica လို့ခေါ်တယ်။ ဟိုးရေ့စ်ကိုယ်တိုင်က ကဗျာအလင်္ကာရှည် အလေ့အကျင့်အသစ်ကို စတင်တဲ့အခါမှာ တည်ရှိပြီးသား ကဗျာ့အယူအဆတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး ကိုယ့် အလေ့အကျင့်အသစ်ကို ပြန်လည်ခုခံ ချေပတဲ့အနေနဲ့ Ars poetics (ဝါ) ကဗျာအတတ်ပညာ ကြေညာစာတမ်းကို ရေးသားခဲ့တယ်။ အဲဒီလို အလေ့အကျင့်အသစ်အတွက် ပြန်လည်ခုခံချေပတဲ့ အရေးအသားတွေကိုလည်း Ars poetica ကဗျာအတတ်ပညာ ကြေညာစာတမ်းလို့ခေါ်တယ်။ ၁၈ဝဝခုနှစ်မှာ ဝီလျံဝါ့ဒ်ဝါ့သ် လစ်ရစ်ဘောလက်တွေအတွက် အမှာကို ရေးခဲ့တယ်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လစ်ရစ် အရေးအသားတွေမှာ ပိုပြီ သာမန်ဆန်တဲ့ နေ့စဉ်သုံးစကားတွေကို လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို အာရုံစူးစိုက်မိလာကြစေဖို့ပဲ။ ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးရဲ့ စိတ်ကူးစံတွေကိုထောက်ခံရင်း၊ ကာလရှည်ကြာစွာ ပဒေ သရာဇ်အစဉ်အလာတွေကို မြင့်တင်ခဲ့တာကိုပယ်ချရင်း ကဗျာမှာ ဘာသာစကားကို သာမန်ဘာသာစကားသုံးစွဲဖို့ရာ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ Ars poetic လို ကဗျာအတတ်ပညာအကြောင်းပြောတဲ့ ကြေညာစာတမ်းမျိုးတွေဟာ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိတ်ကူးစံတွေ အခြေခံကျကျပြောင်းလဲနေတာကိုထောင်ပြပြီး အဲဒီပြောင်းလဲမှုကြောင့် အရေးအသားတွေမှာလဲ ပြောင်းလဲ ပြစ်ရမယ်လို့ ညွန်ပြကြတယ်။ လူမှုရေးစိတ်ကူးစံတွေပြောင်းလဲမှုဟာ ကဗျာ့အရေးအသားနဲ့ အတတ်ပညာတွေအပေါ် အ ကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာပြီး ကဗျာ့အရေးအသားအသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။ စစ်ပွဲတွေ၊ စီးပွားပျက်ကပ်တွေနဲ့ တခြားသော အဓိကလူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေဟာ ကဗျာရဲ့ဟန်အသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ရာ အဓိက အ ကြောင်းတရားပဲ။
တီအက်စ်အဲလိယက်ရဲ့ Tradition and the Individual Talent (1919) အက်ဆေးဟာ ကဗျာဗေဒ၊ ကဗျာအတတ်ပညာကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဥပမာကောင်းတစ်ခုပဲ။ ပထမကမ္ဘာစစ် အဝင်နဲ့ စိတ်ပညာ အသစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို အက်ဆေးမှာတွေ့ရမယ်။ ဆစ်ဂမန်ဖရွိုက်၊ ကားယွန်းတို့ရဲ့ စိတ်ပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးလား ခြင်းဟာ ကဗျာ့အတတ်ပညာသစ်အတွက် အရေးပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အစဉ်အလာအတွင်းမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက စုပေါင်းဘဝတွေအပေါ် အလေးအနက် ထားပြောထားပြီး အဲဒီစုပေါင်းတွေ့ကြုံခံစားမှုတွေကို တသီးပုဂ္ဂလက သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝကို ဖော်ပြဖို့အတွက် သုံးစွဲမှုကို လည်း တွေ့တွေ့ရမယ်။ ကြီးမားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြီးက ကဗျာဆရာ မြင်သမျှ၊ ကြားသမျှထဲ ကိန်းဝပ်နေတယ်။ အဲဒီအရာတွေ က တခုလုံး အဆက်အစပ်ရှိရှိ ထွက်လာတာမဟုတ်ပဲ၊ အပိုင်းအစတွေအနေနဲ့ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ အက်ဆေးမှာ အဲလိယက်က “ကဗျာဆရာရဲ့စိတ်ဟာ တကယ်တော့ အရေအတွက်မဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ စကားစုတွေ၊ နိမိတ်ပုံတွေ အားလုံး ကို သိုလှောင်သိမ်းပိုက်ဖို့ရာအတွက် လက်ခံပေးရတဲ့အရာတခုပဲ။ အဲဒီအရာတွေက ကဗျာဆရာရဲ့စိတ်ထဲကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ဒီ အချင်းအရာတွေဟာ ပုံစံအသစ်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားပုံကို တင်ပြတယ်” လို့ဆိုတယ်။
တကယ်တော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတွေ့ကြုံခံစားမှုဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေတာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဆိုတာကိုလည်း သက် ဆိုင်ရာမျိုးဆက်စာရေးဆရာ တစ်ခုချင်းစီက သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကာလ ကဗျာလောကကြီးအပေါ် သိမှတ်နားလည်မှု တွေကနေ ဆွဲယူပြီး သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ ပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနေတယ်။ အဲလိယက်က သူ ၁၉၂ဝ မှာရေးခဲ့တဲ့ Hamlet အက်ဆေးမှာ ဒီလို တွေ့ကြုံခံစားမှု အပိုင်းအစ အမျိုးမျိုးကနေ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုကိုပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို “အရာဝတ္ထုများနှင့်ဆက်သွယ်မှု” objective correlative လို့ သုံးတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုဟာ တချို့သော အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းမှုတွေ လုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်လို့ရတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေ အတွဲလိုက်ဟာ စာဖတ်သူရဲ့ သီးသန့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို နှိုးဆွနိုင်တယ်။ ဒီသဘောက မော်ဒန်ကာလရဲ့ ကြေညာတွေ အ လုပ်လုပ်ပုံမှာလည်း တွေ့နိုင်တယ်။ ကြေညာတွေက ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြေညာတဲ့အခါမှာ လူကိုကျေနပ်သာယာစေပြီး နှိုးဆွနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အသုံးပြီး လူသားရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့စိတ် ဆန္ဒတွေကို နှိုးဆွတယ်။ အဲလိယက်ရဲ့ ဟမ်းမလက် အက်ဆေးဟာလည်း မော်ဒန် ကဗျာအတတ်ပညာ ကြေညာစာတမ်းအတွက် အရေးပါတယ်။ ဒီအက်ဆေးက အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန် ကဗျာဆရာတွေ သူတို့ရဲ့ အရေးအသားတွေထဲမှာ ပြင်သစ်တွေရဲ့ သင်္ကေတဝါဒဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်ကို ခံယူဖို့ရာ တွန်းအားပေးတယ်။ အဲလိယက်က ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဟာ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ သာမန်ဘဝတွေကို လူသားရဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ခံစားမှု (mood) တွေအဖြစ် ဘယ်လို တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဆောင်ရမလဲ ဆိုတာ ကို ပြသတယ်။
အဲလိယက်အရင် အရေးအသားတွေမှာတွေ့ရတာက သရုပ်မှန်အရေးအသားနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေပဲ။ သရုပ်မှန် အရေး အသားနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အများစုက ပြင်ပအရာဝတ္ထုရဲ့ အရှိတရားကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့ရာ ကြိုးစားတယ်။ အဲလိယက်က သရုပ်မှန်အရေးအသားတွေရဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှုနေရာမှာ ပိုပြီး သိမ်မွေ့တဲ့၊ ပိုပြီး စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိတဲ့၊ ပုဂ္ဂလိကဓိဌာန်ဆန်တဲ့ လစ်ရစ်တွေကို အစားထိုးချင်ခဲ့တယ်။ သာမန်အရာ ဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် တောင် အဲဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျအရှိတရားဆိုတာထက် အရိပ်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ရောထွေးနေပုံတွေ၊ မှောင်မှောင်းညစ်ပတ်နေတဲ့အလင်းရောင်ပုံစံတွေ၊ ပြီးတော့ အဲဒီအရာဝတ္ထုနဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ချက်တွေ၊ ဆိုလို တာ အဲဒီအရာဝတ္ထုအပေါ်မှာ ကဗျာဆရာအနေနဲ့ တုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စိတ်ပျက်မှုတွေ ၊နောင်တတွေ၊ မောပန်းနွယ်နယ်မှုတွေကို ဖော်ပြဖို့ကြိုးစားတယ်။ အဲလိယက်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ လစ်ရစ်တွေက အဲဒီကာလက ပန်း ချီဟန်ပုံစံအသစ်နဲ့ အတော်ကလေးနီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်နေတာတွေ့ရမယ်။ အထူးသဖြင့် ပို့စ်အင်ပရက်ရှင်နစ် ပန်း ချီကားတွေမှာတွေ့ရမယ့် မြင်ကွင်းတွေပဲ။ ဗန်ဂိုးရဲ့ စိတ်မကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေထဲက ကောင်း ကင်ရဲ့ အလင်းရောင်တွေလိုပဲ။ ဒီသဘောဟာ အဲလိယက်အနေနဲ့ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ကဗျာဆရာ ဆက်သွယ်တဲ့ အခါမှာ သရုပ်မှန်အရေးအသားတွေရဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ အရေးအသားတွေကို စွှန့်လွှတ်ပြီး သိမ်မွေ့တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ ရေးသားပုံ အကြောင်းပဲ။ တနည်းအားဖြင့် “ဟမ်းမလက် အက်ဆေး” ပါ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ချက် Objective correlative ဆိုင်ရာ အမြင်ပဲ။
အဲဇရာပေါင်းရဲ့ ကဗျာ့အတတ်ပညာ (ars poetics) ဖော်ထုတ်ချက်ကိုတော့ သူ့ရဲ့နိမိတ်ပုံဝါဒ (imgism) ကိုတည်ဆောက် ပုံမှာတွေ့ရမယ်။ သူ့ရဲ့ နိမိတ်ပုံဝါဒ တည်ဆောက်ပုံဟာ နောက်ပိုင်း Imgist School နိမိတ်ပုံ ဂိုဏ်း ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ ကဗျာအတတ်ပညာ တစ်ရပ်ပဲ။ တနည်းအားဖြင့် ကဗျာဆိုတာကို ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ အမြင်တစ်ရပ်ပဲ။ ဒီ ars poetics ဆိုတဲ့ ကဗျာ့အတတ်ပညာ (ဝါ) ကဗျာ့သဘောတရားအမြင်ကြေညာချက်လိုလို အရာမျိုးဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လူ သားရဲ့ ကဗျာအပေါ်သဘောတရားတွေ သာလျင်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပါဝါတွေ လည်ပတ်အလုပ်လုပ်အရင် တည် ဆောက်ဖြစ်တည်နေတဲ့ ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ အဲလိယက်တို့ ၊ ပေါင်းတို့ရဲ့ အမြင်ဟာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းလို ကျယ်ပြန့်လာတယ်။ ဒီအမြင်အသစ်တွေကိုဆက်ခံပြီး ကိုယ်ပိုင်ကဗျာဗေဒ၊ ကဗျာ့အတတ်ပညာအဖြစ် တည်ဆောက်ကြတယ်။ ပေါင်းရဲ့ နိမိတ်ပုံ ဝါဒအမြင်ကို “A retrospect “ မှာတွေ့ရမယ်။ ပေါင်းက အဲလိယက်ရဲ့ အမြင်နဲ့ မတူဘူး။ သူက ကဗျာဆရာရဲ့ အပြင်ဘက်က စိတ်ကူးကွန့်မြူးမှု ပုံစံ ဆီကိုသွားရမယ်။ ဥပမာ ကောင်းကင်ဆိုရင် အဲဒီကောင်ကင်ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန် အပြင်ဘက်ကထွက် လာတဲ့ အစဉ်ပုံစံ (patterns) တွေကို ရှာဖွေရမယ်။ သူပြောတဲ့ နိမိတ်ပုံဝါဒဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း “ကဗျာဟာ ဓါတ်ပုံ အတတ်ပညာနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်”၊ ကဗျာဟာ အရာဝတ္ထုရဲ့ပင်ကိုယ်သဘော၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှု ဆိုတာကို ရှာဖွေရမယ်လို့ ယူတယ်။ နောက်ပိုင်း ပေါင်းရဲ့ ဒီနိမိတ်ပုံဝါဒ အမြင်တွေဟာ မော်ဒန်ဝါဒ အလွန်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Objectivist School နဲ့ ဆက်သွယ်သွားတယ်။ ရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်အာရုံတစ်ရပ်ရှိရမယ်၊ အကြောင်းအရာကို သေချာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရမယ်၊ မဆိုင်တဲ့အရေးအသားတွေကို တင်းတင်ကြပ်ကြပ် ရှောင်းရှားရမယ်၊ အမြင်အာရုံကို ဖျတ်ခနဲ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရမယ်လို့ ဖြစ်လာ တယ်။
ပေါင်းအတွက် ကဗျာဆိုတာ “သဘာဝ ဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် လေ့လာစူးစမ်းရင်းကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမြင်ဆိုင်ရာ အာရုံသိမှု ရဲ့ ဘာသာစကား” သာလျင် ဖြစ်တယ်။ နိမိတ်ပုံမှန်သမျှက ကဗျာအတွက်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ် ဘူး။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအပေးမှာ အသေအချာလေ့လာစူးစမ်းပြီးမှ ရလာတဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ အာရုံသိမြင်မှုက သာလျင် အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ (ပေါင်းအမြင်) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ကဗျာဆရာကို ကျယ်ပြန်တဲ့ အာ ရုံသိမှုကနေတစ်ဆင့် တစ်ခုတည်းသော ပုံစံအဖြစ် စုစည်းညီညွတ်မှု (unity) ဆီကို သွားအောင်ခေါ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ပေါင်းနဲ့ အဲလိယက်ရဲ့ ကဗျာ့အတတ်ပညာ၊ ကဗျာ့အမြင်ဟာ ကွဲလွဲချက်တွေ ရှိတယ်။ ကဗျာဗေဒ အဆက်အစပ်အတွင်းမှာ ဖော်ပြ တဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုဆီကိုသွားရာမှာ ကွဲလွဲပေမယ့်၊ စုစည်းညီညွတ်မှုဆိုတာအပေါ် (အတွေးအခေါ်ပိုင်းက မြင်ပုံမှာတော့)သူတို့ တွေဟာ သိပ်ပြီးမကွာလှဘူး။ “စုစည်းညီညွတ်မှု (ဝါ) အမျိုးသားရေးပေါင်းစည်းမှု အစီအစဉ်” ဦးတည်နေကြတယ်။
အဖြစ်အပျက်ကို အသေအချာလေ့လာစူးစမ်းရင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အမြင်ဆိုင်ရာ အာရုံသိမှု၊ ဓါတ်ပုံဆန်တဲ့ ရှင်းလင်တဲ့ အမြင်အာရုံ၊ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ပြင်ပက စိတ်ကူးကွန့်မြူးမှု နဲ့ အစဉ်ပုံစံ အဲဒီအရာတွေကနေမှတစ်ဆင့် တစ်ခုတည်းသော စုစည်းညီညွတ်မှု ဆီ သွားပုံကို ပေါင်းရဲ့ မြေအောက်မီးရထားဘူတာရုံဆိုတဲ့ နှစ်ကြောင်းကဗျာ တိုကလေးမှာတွေ့ရတယ်။ ပေါင်းက မြေအောက် မီးရထားဘူတာရုံမှာ မီးရထားစောင့်နေတဲ့ လူအုပ်ရဲ့ မျက်နှာတွေကနေ ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုကတယ်၊ အဲဒီသူတွေရဲ့ မျက်နှာက မိုးရေတွေစိုစွတ်နေတဲ့ သစ်ပင်အကိုင်အခက်က ပွင့်ချပ်လေးတွေစီထားသလိုနဲ့ ဆင်နေတယ်လို့ ပေါင်းက မြင်တယ်။ အဲဒီမှာ ပေါင်းဟာ သူ့အမြင်အာရုံမှာ လာရိုက်ခတ်တဲ့ ပုံစံနှစ်ကို ကပ်လျက်ယှဉ်ပြ (juxtapostions) လုပ်ပြီး ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ပုံစံနှစ်ခုကို ယှဉ်တွဲပြတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ရပ်ဟာ ကဗျာအနေနဲ့ သဘာဝလောကထဲကနေမှ ရလိုက်တဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန်တဲ့ အာရုံသိမြင်မှုပုံစံပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီအာရုံသိမြင်မှု ဘာသာစကားဟာ ပေါင်းအတွက်တော့ ကဗျာhဘာသာစကားအမျိုးအစားတစ်ရပ် ဖြစ်လာတာပဲ။
အဲလိယက်နဲ့ပေါင်းတို့ရဲ့ ကဗျာအတတ်ပညာပဲ ပြောပြော၊ ကဗျာဆိုတာဘာလဲ၊ ကဗျာ့သဘောတရား၊ ကဗျာအတွေးအခေါ်ပဲ ပြောပြော ဒီအရာတွေဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဒဿနပညာနဲ့ သိပ္ပံပညာအပေါ် အခြေခံထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အရေးကြီးတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ခေတ်ကာလလိုက်ပြီး ကဗျာဆိုတာဘာလဲ၊ ကဗျာအတတ်ပညာ၊ ကဗျာ့နဲ့ ပတ် သတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေတာ။ အဲလိယက်တို့ကတော့ သူတို့ ခေတ်ရဲ့ ဘရုတ်ဘယက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို မနှစ်ခြိုက်လှဘူး။ ဒီအခြေအနေအတွင်း သူတို့ ကဗျာ့အတတ်ပညာရဲ့ နောက်ကွယ်က အဓိကကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ရပ်က ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစုစည်းညီညွတ်မှု (unity of culture) ပဲ။ သူတို့က လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်နေတယ် လို့ ယုံကြည်တဲ့ အတွက် အစီအစဉ် (order) တစ်ခုဆီကို သွားချင်ကြတယ်။ ဒီတော့ အဲလိယက်က အစီအစဉ်ကို ရှာဖွေတဲ့ အခါမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲက ရှာဖွေပြီးပေါင်းကတော့ သဘာဝလောကကနေ ရှာဖွေတယ်။ အဲလိယက်နဲ့ ပေါင်း ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာ ရှာဖွေမှုနဲ့သဘာဝလောကထဲက ရှာဖွေမှုဆိုတာ အမေရိကန် ကဗျာ့အတတ်ပညာမှာ ပူးလိုက်ခွာ လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုပဲ။
နောက်ပိုင်း ကဗျာ အတတ်ပညာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောဆိုကြတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အများကြီးပေါ်ပေါက် ကြတယ်။ ဇူးကော့ စကီးရဲ့ Objectivists ( 1931 ) က စလို့ ချားလ်ဘန်စတိုင်းနဲ့ ဘရူးအင်ဒရူးရဲ့ ဂျာနယ် L=A=N=G=U=A=G=E ကနေ အစပြုပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာစကားအခြေပြုကဗျာတွေအထိပဲ။ ဘန်းစတိုင်းကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ရဲ့ ကဗျာ့အတတ် ပညာ (ဝါ) ကဗျာ့အတွေးအခေါ်၊ ကြေညာစာတမ်း (ars poetica) ကို ရေးခဲ့တာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ၁၉၈၆ ထုတ် Content’s Dream နဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် A Poetics တို့ကိုကြည့်နိုင်တယ်။ သူတို့ ကြုံတွေ့ရဲ့ တဲ့ ခေတ်ကာလ၊ သူတို့ ခံယူခဲ့ရတဲ့ ကဗျာ့အစဉ်အလာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး တုံ့ပြန်ကြတာပါပဲ။ အမေရိကန် ကဗျာဆရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကဗျာတွေကို အင်္ဂလိပ်ကဗျာတွေကနေ ကွဲပြားဖို့ အားထုတ်ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ပုံသဏ္ဌာန်သက်သက် ကွဲပြားခြားနားဖို့ရာ အားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေပါမတူဘူးဆိုတာ ပြဖို့အားထုတ်ကြတာပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ဘာ သာရေးအခြေခံ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နီးစပ်နေပုံမျိုးတွေကနေပါ ကွဲပြားခြားနားအောင် အားထုတ်ကြတာပါ။ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူ့ အဖွဲ့အစည်း၊ သမိုင်း အရင်းအမြစ်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း မြစ်ဖျားခံတဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးတွေနဲ့ ကဗျာ့အတတ်ပညာ (ars poetica) ကို တည်ဆောက်ယူကြတာပါပဲ။
Elitot ,T.S.1960 Christianity and Culture: The Idea ofaChristian Society and Notes TowardsaDefination of Culture .
Pound, Ezra.1968 “ A Retrospect.” In Lieterary Essays of Ezra Pound , edited by T.S. Eliot .
Quartermain ,Peter. 1992 . Disjunctive Poetics : From Gertrude Stein and Louis Zukofsky to Susan Howe.
← သင်းရည်​လွင်​ – သတိတရ မှတ်​တမ်း
သန်းဝင်းလှိုင် – ဆာဂျွန်ဆိုင်မွန် →